Bitcoin yatove pamutemo muEl Salvador uye inova nyika yekutanga kuibvumidza seyemutemo nyoro | Kubva kuLinux
Darkcrizt | 09/06/2021 18:54 | Yakagadziridzwa ku 10/06/2021 01:58 | Noticias
Nhasi June 9, 2021 rave zuva rakakosha kwazvo reBitcoin, kubvira Mutungamiri weEl Salvador Nayib Bukele akabhadharwa neCongress yenyika ine mavhoti makumi matanhatu nemaviri kubva pamakumi masere nemana. Nezve izvi, El Salvador inova nyika yekutanga kudzika mutemo unoshandura Bitcoin kuita mutero wepamutemo.
Uye ndezvekuti nguva pfupi yadarika takataura nezvazvo pano pa blog uye mutungamiri weSalvador ari kutsvaga simba mu bitcoin kugadzirisa akawanda ehupfumi uye magariro matambudziko enyika, Zvakanaka, panguva yemusangano weBitcoin 2021, Mutungamiri Nayib Bukele vakazivisa kuti bhiri raigadzirirwa kuCongress raizoita Bitcoin mari yepamutemo munyika uye zvaive.
"Chinhu chemutemo uyu kugadziriswa kwe bitcoin sedare repamutemo, risingabvumidzwe kurodha pasi, risingagumi mune chero chiitiko", tinogona kuverenga muchinyorwa chekutanga chemavara izvo zvino zvinongoda kugamuchirwa neMusoro weHurumende seri kweprojekiti. .
Bukele akarumbidza kugona kwedigital mari kubvumidza vemuSalvador vanoshaya mukana kuwana mari zviri pamutemo, kubatsira maSalvador anogara kunze kwenyika kutumira mari kumba zviri nyore, uye nekugonesa mabasa.
"Munguva pfupi, izvi zvichagadzira mabasa uye zvinobatsira kupa mari kuzviuru zvevanhu vari kunze kwehupfumi hwenyika," Bukele akadaro muvhidhiyo yake.
Sekureva kwemamwe masosi, El Salvador inyika ine hupfumi hwakawanda, uko kwakatenderedza 70% yevagari isina account yekubhangi kana kiredhiti kadhi.
Mutungamiri weSalvador Anogutsikana yekugadzira bitcoin zviri pamutemo tender ichagadzirisa akawanda matambudziko ehupfumi pamwe nemagariro enyika.
"Ichasimudzira hupenyu neramangwana remamiriyoni evanhu," akadaro Bukele.
Ipo Bukele achifara nezvechirongwa chake, vamwe vanonetsekana nezvinhu zvakaita sekushomeka ye bitcoin uye kukanganiswa kwazvinogona kukonzera mune yanhasi hurongwa hwemari.
Sezvo muenzaniso wakajeka uri pamusoro pemwedzi mitatu, kubva muna Gumiguru 2017 kusvika Ndira 2018, semuenzaniso, kusagadzikana kwemitengo ye bitcoin yakasvika ingangoita 8%. Izvi zvinopfuura zvakapetwa kusagadzikana kwe bitcoin mukati menguva yemazuva makumi matatu inopera Ndira 30, 15.
Zvisinei, vaongorori vanoti iko kushandiswa kwe bitcoin semari yenyika dzichiri kusimukira izvo parizvino zviri kuona kukwira kwemitengo zvinonakidza kana iwe ukafunga kusagadzikana kweiyo bitcoin mune idzi hupfumi uchienzaniswa nekusagadzikana kwe bitcoin muUSD (parizvino mari yepasi rose yekutengesa).
Nekuda kweizvi, vamwe vezvehupfumi vanoona Bitcoin senzvimbo yakachengetedzwa kana nzvimbo yakachengeteka, Sezvo bitcoin yakatsanangurwa senzvimbo yakachengeteka kubva payakatangwa, uye vaongorori vakasiyana-siyana uye zvinyorwa vanoedza kuzviita zvichibva chete pamusika data.
Ipo izvi zvichishanda nemazvo kuzvinhu uye zvigadzirwa zvine hurefu hwakareba mumusika, kune iyo bitcoin imwe nzira yakanaka. Mishumo nguva pfupi yadarika yakaratidza kuti Iran yaiishandisa kunzvenga zvinokanganisa hupfumi hwayo.
Asi dzimwe nyanzvi dzinopesana nepfungwa iyi. Sekureva kwavo, bitcoin inonyanya kushanduka, isinganetsi mvura uye inodhura kutengesa (maererano nenguva nemari) kupfuura zvimwe zvinhu (kusanganisira goridhe, chinyakare nzvimbo yakachengeteka), kunyangwe pasi pemamiriro ese emusika. Kusvikira musika wakura, zvingave zvine njodzi kuona Bitcoin senzvimbo yakachengeteka.
Pamusoro pezvinonetsa izvi, pane dambudziko rekushandisa kwesimba bitcoin., iyo inoramba ichikura gore rega. Parizvino, bitcoin inoshandisa simba rakawanda remagetsi kupfuura Argentina. Iyi ndiyo imwe yemhedziso yekuongororwa neCentre for Alternative Finance kuYunivhesiti yeCambridge yakaburitswa muna Kukadzi apfuura. Hechino imwe fungidziro yesimba rekushandisa kwesainzi cryptocurrency rutsigiro network pa1% yeiyo yepasirese. Saka nyanzvi dzezvemamiriro ekunze dzinonyevera kuti kutorwa kwakawanda kwe bitcoin kunogona kutungamira kune nyonganiso yemagetsi.
Parizvino, danho reEl Salvador inyaya yakasarudzika, nekuti kunyangwe iko kushandiswa kwe bitcoin kunotenderwa munyika dzinoverengeka pasirese, hapana kana mumwe wavo achiri kutora danho rekunyoresa mari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Bitcoin yatove pamutemo muEl Salvador uye inova nyika yekutanga kuibvumidza seyemutemo nyoro